သျှင်နေမင်း: May 2011
သူနဲ့သူမ ကုမ္ပဏီရဲ့ ညစာစားပွဲတစ်ခုမှာ ဆုံကြတယ်။ ပညာတတ်၊ ရုပ်ချောနုပျိုတဲ့ သူမက ကုမ္ပဏီမှာ သတင်းမွှေးတယ်။ သူက
သာမန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ပိုးပန်းသူတွေ မနည်းလှတဲ့ သူမကို သူလည်း စိတ်ဝင်စားနေတာ ကြာပါပြီ။ ညစာစားပွဲ အပြီးမှာ သူမကို ကော်ဖီတိုက်ဖို့ သူဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ ရုတ်တရက် ဖိတ်ခေါ်မှုကို သူမ အံ့သြသွားပေမဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို
မလွန်ဆန်ချင်တဲ့ သူမ ခေါင်းညိတ်လက်ခံခဲ့တယ်။
ကော်ဖီဝိုင်းမှာ သူတို့ ပြောစရာစကား မရှိဖြစ်နေတယ်။ နှစ်ယောက်လုံး ရှိုးတိုးရှန့်တန့်ဖြစ်နေတယ်။ မြန်မြန် လက်စသတ်ပြီး ထပြန်ဖို့
သူမစိတ်လောနေမိတယ်။ စားပွဲထိုး ကော်ဖီလာချတော့ သူက ရုတ်တရက်
"ကျေးဇူးပြုပြီး ဆားပေးပါ။ ကျွန်တော်က ကော်ဖီသောက်ရင် ဆားထည့်သောက်တဲ့ အကျင့်ရှိလို့" လို့ ပြောတော့ သူမ အံ့သြရုံတင်မက စားပွဲထိုးပါ ကြောင်သွားတယ်။ သူ့စကားကြားတဲ့ လူတွေရဲ့ မျက်လုံးက သူအပေါ် လာစုနေကြတယ်။
စားပွဲထိုးပေးလာတဲ့ ဆားကို ကော်ဖီထဲထည့်ဖျော်ပြီး သူဖြေးဖြေးချင်း သောက်နေတယ်။ "ဘာဖြစ်လို့ ဆားထည့်သောက်တာလဲ" သိချင်စိတ်ကို မအောင့်နိုင်တဲ့အဆုံး သူမမေးလိုက်မိတယ်။ သူခဏလောက် မှင်သက်သွားတယ်။
ပြီးမှ တစ်လုံးချင်း "ကျွန်တော်တို့က ပင်လယ်ဘေးမှာ နေတယ်။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်က ပင်လယ်ထဲ အမြဲ ရေဆင်းကူးတယ်။ လှိုင်းပုတ်ရင် ခါးသက်သက် ပင်လယ်ရေငန်တွေက ပါးစပ်ထဲဝင်လာရော့။ အခု အိမ်မပြန်ဖြစ်တာ ကြာပြီဆိုတော့ အိမ်ကိုလွမ်းတိုင်း ကော်ဖီထဲ ဆားထည့်သောက်မိတယ်။ အိမ်ရဲ့အကွာအဝေးကို ကျွန်တော်နဲ့ နီးအောင် ဆွဲလိုက်သလိုပေါ့"
သူ့စကားက သူမကို ခံစားမိစေခဲ့တယ်။ ဒါဟာ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက် အိမ်ကိုလွမ်းတယ်လို့ ပြောတာကို သူမ ပထမဆုံး ကြားဖူးခြင်းပါပဲ။ အိမ်ကိုလွမ်းတဲ့ ယောက်ျားလေးက အိမ်ကို ဂရုစိုက်တတ်တဲ့လူ၊ မိသားစုကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်တဲ့လူလို့ သူမထင်ခဲ့မိတယ်။ သူပြောတဲ့ မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုအကြောင်းကို သူမနားထောင်ချင်စိတ် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အေးစက်စက် သူတို့ရဲ့ စကားဝိုင်းက တဖြေးဖြေးနွေးထွေးလာခဲ့တယ်။ သူတို့စကားတွေ အကြာကြီးပြောဖြစ်ခဲ့သလို သူမရဲ့ အပြန်ကို သူလိုက်ပို့ခွင့်ရခဲ့တယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်း သူတို့မကြာခဏ ချိန်းတွေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူဟာ သဘောထားကြီးသူ၊ ဂရုစိုက်တတ်သူ၊ ကြင်နာတတ်သူ ဖြစ်ကြောင်း သူမသတိထားမိတယ်။ သူဟာ သူမလိုချင်တဲ့ အချက်အားလုံးနဲ့ ကိုက်ညီနေတယ်။ သူ့ဖိတ်ခေါ်မှုကို မလွန်ဆန်ခဲ့မိလို့ အခုလို သူနဲ့သိခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်လည်း သူမ၀မ်းသာနေမိတယ်။ သူ့ကိုခေါ်ပြီး မြို့အနှံ့ ကော်ဖီဆိုင်မှာ သူတို့ ထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ဆိုင်မှာထိုင်တိုင်း "ဆားပေးပါနော်။ ကျွန်မ မိတ်ဆွေက ကော်ဖီထဲ ဆားထည့်သောက်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိလို့ပါ" လို့ သူမတောင်းဆိုတတ်တယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ ရာဇ၀င်ပုံပြင်ထဲကလို နောက်ဆုံးမှာ မင်းသားနဲ့မင်းသမီး ညားကြလေသတည်း ဆိုတဲ့အတိုင်း သူတို့ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘ၀ခရီးကို လျှောက်လှမ်းခဲ့ကြတယ်။ လျှောက်ခဲ့တဲ့ခရီး အနှစ်(၄၀)အကြာမှာ သူနာမကျန်းဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်။ ပုံပြင်က ဒီမျှပါပဲလို့ အဆုံးသတ်မယ်ဆဲဆဲ သူထားခဲ့တဲ့ စာတစ်စောင်ကို သူမတွေ့လိုက်တယ်။
သူ မဆုံးခင် သူမအတွက် ရေးထားတဲ့ စာတစ်စောင်ပါ။ စာက ဒီလိုရေးထားပါတယ်။
"နင့်ကိုတောက်လျှောက် လိမ်လာခဲ့တဲ့ ငါ့ကို ခွင့်လွတ်ပေးပါ။ ပထမဆုံးအကြိမ် ငါတို့ ကော်ဖီအတူတူ သောက်ခဲ့ကြတာကို နင်မှတ်မိသေးလား။ အဲဒီတုန်းက ငါဘာပြောလို့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘာအတွေးတွေ ရပြီး စားပွဲထိုးကို ဆားယူခိုင်းမိလိုက်သလဲ မသိဘူး။ ကော်ဖီထဲ ဆားထည့်သောက်တဲ့ အကျင့်မရှိပေမဲ့ နင့်ကိုငါ လိမ်ညာခဲ့တယ်။ အဲဒီလိမ်ညာခြင်းကို
နင်စိတ်ဝင်စားခဲ့လို့ ဆားထည့်ထားတဲ့ ကော်ဖီကို ဘ၀ထက်ဝက်ဆာလောက် ငါသောက်ခဲ့ရတယ်။ အဖြစ်မှန်ကို ပြောပြဖို့ ငါအကြိမ်ကြိမ်
ကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ နင်စိတ်ဆိုးမှာ၊ နင်ငါ့ကို ခွဲသွားမှာ ငါအရမ်းကြောက်ခဲ့မိတယ်။
အခု ငါသွားရတော့မယ်။ နင်စိတ်ဆိုးမှာကို ငါမကြောက်တော့ဘူး။ သေသွားတဲ့လူကို အလွယ်တကူ ခွင့်လွတ်ပေးနိုင်မယ် မဟုတ်လား.. ဒီဘ၀မှာ နင်နဲ့ ပေါင်းဖက်ခွင့်ရတာ ငါအတွက် အကြီးမားဆုံးသော ပျော်ရွှင်ခြင်းပဲ။ နောင်ဘ၀သာရှိမယ်ဆိုရင် နင်နဲ့ငါ ထပ်ဆုံချင်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆားခတ်ထားတဲ့ ကော်ဖီကိုတော့ ငါမသောက်ချင်တော့ဘူး။ ဆားခတ်ထားတဲ့ ကော်ဖီက သောက်ရ
တော်တော်ခက်တယ်ဆိုတာ နင်မသိဘူး မဟုတ်လား... ဒါပေမဲ့ နင့်ကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ကော်ဖီထဲ ငါဆားထည့်သောက်ခဲ့မိတယ်"
စာကိုဖတ်ပြီး သူမ တုန်လှုပ်သွားခဲ့မိတယ်။ အလိမ်ညာ ခံလိုက်ရပါလားလို့လဲ ခံစားမိတယ်။ သူ မကြားနိုင်တော့တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို သူမ တိုးတိုးလေး ရေရွတ်လိုက်မိတယ်။ " ကျွန်မကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ သူ့ကိုယ်သူ ဒီလိုလိမ်ညာခဲ့တယ်။ ကျွန်မ ကျေနပ်ပါတယ်"
Posted by သျှင်နေမင်း at 4:47 AM
ပထမဆုံးအကြိမ် ဆရာမိဘ အစည်းအဝေးမှာ အတန်းပိုင်ဆရာက “အစ်မရဲ့ကလေးက ရောဂါထူတယ်။ ခုံပေါ်မှာတောင် သုံးမိနစ်ကြာအောင် မထိုင်နိုင်ဘူး။
ဆရာဝန်နဲ့ ပြကြည့်ရင် ကောင်းမယ်”
အိမ်အပြန်လမ်းမှာ ဆရာမ ဘာပြောသလဲလို့ သားကမေးတော့ သူမျက်ရည်ဝဲမိတယ်။ အတန်းသား ၃ဝထဲမှာ သားက အညံ့ဆုံး၊ ဆရာမတွေကို
စိတ်ဒုက္ခအပေးဆုံး... ဒါပေမယ့် သားအမေးကို သူပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။
“ဆရာမက သားကိုချီးကျူးသွားတယ်။ အရင်တုန်းက ခုံပေါ်မှာ သားတစ်မိနစ်ပဲထိုင်နိုင်တယ်။ အခုဆို သုံးမိနစ်တောင် ထိုင်နိုင်ပြီတဲ့။ တစ်ခြားကလေးတွေရဲ့
မေမေတွေက မေမေ့ကို အားကျကြတယ်။ တစ်တန်းလုံးမှာ သားက စာအကြိုးစားဆုံးတဲ့”
အဲဒီညမှာ သူခွံ့စရာမလိုဘဲ သားက ထမင်းနှစ်ပန်းကန် ကုန်အောင်စားလိုက်တယ်။
ဆရာမိဘအစည်းအဝေးမှာ ဆရာမက “ကျောင်းသား ၅ဝမှာ အစ်မရဲ့သားက အဆင့်၎ဝ၊ သူ့အသိဥာဏ် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ကျွန်မတို့ သံသယဖြစ်တယ်။
အိမ်အပြန်လမ်းမှာ သူမျက်ရည်ကျမိပြန်ပေမယ့် ကားရှေ့ခုံမှာ ထိုင်နေတဲ့သားကို “ဆရာမက သားကို စိတ်ချယုံကြည်တယ်တဲ့။ သားက မတုံး၊ မအပေမယ့်
စာထဲစိတ်ပါပါနဲ့ နည်းနည်း ထပ်ကြိုးစားလိုက်ရင် သားဘေးမှာထိုင်တဲ့ အဆင့်၂၁ရတဲ့ ကျောင်းသားကိုတောင် ကျော်နိုင်တယ်တဲ့” လို့ ပြောလိုက်တယ်။
သူ့စကားကို ကြားတော့ ငေးမှိန်နေတဲ့ သားမျက်လုံးက အရောင်လက်သွားခဲ့တယ်။ ညှိုးငယ်နေတဲ့မျက်နှာလည်း ရွှင်လန်းလို့လာတယ်။ သားတဖြေးဖြေး
သိတတ်နားလည် ကြီးပြင်းလာမှန်း သူသတိထားလိုက်မိတယ်။
နောက်တစ်နေ့ ကျောင်းတက်ဖို့ ခါတိုင်းထနေကျအချိန်ထက် သားအစောကြီး နိုးနေခဲ့တယ်။
ဆရာမိဘအစည်းအဝေးမှာ သားရဲ့ ထိုင်ခုံနေရာမှာ သူသွားထိုင်နေခဲ့ပြီး သားနာမည် အခေါ်ခံရဖို့ကို သူစောင့်နေခဲ့တယ်။ အစည်းအဝေးတိုင်းမှာ
သားနာမည်ဟာ မပါမဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အစည်းအဝေးပြီးတဲ့အထိ သားနာမည် မပါခဲ့ဘူး။ တစ်ခုခုမှားတယ် အထင်နဲ့ တာဝန်ကျဆရာမကို
“အခုရမှတ်နဲ့ဆိုရင် အစ်မရဲ့သားက နာမည်ကြီးကျောင်းရဖို့ သိပ်မလွယ်ဘူး”
စိတ်ထဲမှာ သူဝမ်းသာသွားမိတယ်။ အခန်းဝမှာ စောင့်နေတဲ့ သားရဲ့ပုခုံးကို သိုင်းဖက်ပြီး ဝမ်းသာအားရတဲ့ အသံနဲ့ “ သား... သားရဲ့အတန်းပိုင် ဆရာမက
ပြောတယ်။ သားဒီ့ထက် နည်းနည်းထပ်ကြိုးစားရင် နာမည်ကြီးတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းကို ဝင်နိုင်တယ်တဲ့”
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် အကြောင်းကြားစာ လာယူဖို့ ကျောင်းကဖုန်းဆက်တော့ သားကို သူလွတ်လိုက်တယ်။
သူ့အသိစိတ်ထဲမှာ နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တစ်ခုကို သားရမယ်လို့ ကြိုသိနေခဲ့တယ်။ စာမေးပွဲ မဖြေခင်တုန်းက ဒီတက္ကသိုလ်အတွက် သားအမှတ်မီနိုင်တယ်လို့
အိမ်တံခါးဝမှာ ဆီးကြိုနေတဲ့ သူ့လက်ထဲ သူမှန်းထားတဲ့ တက္ကသိုလ်က အကြောင်းကြားစာကို သားက ကမ်းပေးလိုက်တယ်။ သားအမိနှစ်ယောက်
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဖက်ပြီး ငိုခဲ့ကြတယ်။
“မေမေ... သားဟာ ဥာဏ်ကောင်းတဲ့ ကလေးတစ်ယောက် မဟုတ်မှန်း သားကိုယ်သား သိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလောကမှာ သားကို အလေးအနက်ထား
နှစ်သက်ခဲ့တာ မေမေတစ်ယောက်တည်းပဲ ရှိခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးပါ မေမေ”
သားစကားကြောင့် ၁ဝနှစ်ကျော်ကြာ ရင်ထဲ တိတ်တခိုးသိမ်းဆည်းထားတဲ့ ပူဆွေးသောကတွေက သူ့ပါးပြင်ပေါ် ဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့ မျက်ရည်အသွင်ဖြင့်
This life is too short even to love... I don't know how people find time to hate.....♫ ♥♫ ♥♫
§§§§§§§§§¶¶1§ Aʊяuღ ℝ@ßbḯ⊥1§¶§§§§§§§§§
Posted by သျှင်နေမင်း at 4:59 AM
ကျွန်တော်အထက်တန်းကျောင်း စတက်ချိန်တုန်းက ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့
အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို ခုချိန်ထိ မှတ်မှတ်ထင်ထင် သတိရနေခဲ့မိပါတယ်…
အဲဒီနေ့က ကျောင်းဆင်းလို့ အိမ်အပြန်မှာ ကျွန်တော်နဲ့ မလှမ်းမကမ်း
ကျွန်တော့်ရှေ့နားမှာ တစ်ယောက်တည်း လျှောက်နေတဲ့ အတန်းထဲက
ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်.. သူ့ကြည့်ရတာ လက်နှစ်ဖက်လုံး
ပြည့်အောင် စာအုပ်တွေ ပွေ့ပိုက်လို့ ထားတာကြောင့် ရှိသမျှ
ကျောင်းစာအုပ်တွေအားလုံး အိမ်ကို ပြန်သယ်ယူလာပုံရတယ်... သူ့ကိုကြည့်ပြီး
ကျွန်တော်တွေးလိုက်မိပါတယ်.. “ဘာကြောင့်များ ဒီနေ့လို သောကြာနေ့မျိုးမှာ
စာအုပ်တွေ အားလုံး အိမ်ကို သယ်ပြီး ပြန်ရတာပါလိမ့် .. ဒီကောင်ဟာ
ကပ်သီးကပ်သပ် ကောင်စားမျိုးဘဲ ထင်ပါတယ်.. ကျွန်တော့်မှာတော့ ဒီပိတ်ရက်မှာ
သွားလာ လည်ပတ်ဖို့ စဉ်းစား စီစဉ်ထားတာတွေက အများကြီးပါဘဲ..
လျှောက်လည်မယ်.. ဘောလုံးကန်မယ်.. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဂိမ်းကစားမယ်..
မုန့်ဆိုင်တွေမှာ မုန့်လိုက်စားကြမယ်.. အိုး.. လုပ်စရာတွေမှ
အများကြီးပါဘဲ…. ဒီပိတ်ရက်မှာ သူ့လို စာအုပ်ကြီးတွေ အိမ်ပြန်သယ်ပြီး
ကိုယ့်ဒုက္ခ ကိုယ်ရှာဖို့ အစီအစဉ်ကို မရှိပါဘူး.. ” စဉ်းစားမိရင်း
ကျွန်တော့်ပုခုံးကို အသာတွန့်လိုက်ပြီး လမ်းဆက်လျှောက် လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီလိုလျှောက်လာနေရင်း ကျွန်တော်တို့နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်အရပ်ကနေ
ကလေးတစ်အုပ်ဟာ ပြေးပြေးလွှားလွှား ဆော့ကစားလာနေကြတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်..
ကလေးတွေဟာ ကျွန်တော့်ရှေ့ကနေ လျှောက်နေတဲ့ သူ့ကို အရှိန်နဲ့
၀င်တိုက်မိလိုက်ပြီး သူ့လက်ထဲက စာအုပ်တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်ကြီးဟာ
မြေပြင်ပေါ်ကို ပြုတ်ကျကုန်ပါတယ်.. သူကိုယ်တိုင်လည်း ဖင်ထိုင်ရက်
လဲကျသွားပြီး သူတပ်ထားတဲ့ မျက်မှန်ဟာ သူနဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်း ၁၀ပေ
လောက်အကွာကို လွှင့်ထွက်သွားပါတော့တယ်.. သူ့မျက်နှာဟာ ရှုံ့မဲ့နေပြီး
ကြည့်ရတာ အတော် နာကျင်သွားပုံရပါတယ်.. ပြီးတော့ လွှင့်ကျသွားတဲ့
သူ့မျက်မှန်ကို မြေပြင်ပေါ်မှာ စမ်းစမ်း စမ်းစမ်းနဲ့ လိုက်ရှာနေတာ
ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရပါတယ်.. ဒီကောင်ဟာ မျက်မှန်မပါရင် ဘာကိုမှ သဲသဲကွဲကွဲ
မြင်နိုင်ဟန် မတူပါဘူး… တစ်ချက်တစ်ချက် မော့လာတဲ့ သူ့မျက်နှာကြောင့်
သူ့မျက်ဝန်းမှာလည်း မျက်ရည်စ တစ်ချို့ကို တွေ့လိုက်မိပါတယ်.
သူ့ကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော် တော်တော်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာကြောင့်
သူ့အနားကို အမြန်တိုးကပ်သွားကာ မျက်မှန်ကို ကောက်ယူလိုက်ပြီး
နှစ်သိမ့်တဲ့အပြုံးလေးတစ်ခုနဲ့ “ကလေးတွေက ဒီလိုပါဘဲ.. သူတို့မှာ
ဆော့ဖို့စိတ်ကလွဲလို့ ဘာမှ မရှိကြဘူး ” လို့ပြောရင်း သူ့ကို
လှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်.. “အိုး ကျေးဇူးဘဲ” သူကလည်း ပြန်ပြုံးပြလိုက်ပြီး
ကျွန်တော့်ကို ကျေးဇူး စကား ဆိုပါတယ်။
သူထနိုင်အောင် ကျွန်တော် သူ့ကို ဆွဲထူပေးလိုက်ပြီး သူ့စာအုပ်တွေကိုလဲ
ကူကောက်ပေးကာ သူဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာ စကား စ မေးလိုက်ပါတယ်.. သူပြန်ဖြေတဲ့
သူ့နေရပ်လိပ်စာဟာ ကျွန်တော့်အိမ်နဲ့ နီးနီးလေးဆိုတာ
ကျွန်တော်သိလိုက်ရပေမဲ့ သူ့ကို အရင်က တစ်ခါမှ ကျွန်တော်
မတွေ့ခဲ့ဖူးပါဘူး.. ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က “အရင်က ဘာလို့ မတွေ့ဖူးကြတာလဲ”
လို့ မေးလိုက်တော့ သူဟာ နံမည်ကြီး ဘော်ဒါတစ်ခုမှာ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား
နေခဲ့ရတာ ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်တို့ တက်နေတဲ့ ဒီကျောင်းကို အခုမှ
ရောက်တာတာဖြစ်ကြောင်း ပြန်ရှင်းပြပါတယ်.. ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ
သူပြောတဲ့ ဘော်ဒါဆိုတဲ့ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား ကျောင်းသားဘ၀မျိုး
ဘယ်တုန်းကမှ မနေခဲ့ဖူးပါဘူး.. ပြီးတော့ သူ့နံမည်က ကာလ်း
ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ကျွန်တော် သိလိုက်ရပါတယ်။
အိမ်ကိုလျှောက်လာတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်လုံး ကျွန်တော်တို့ စကားတွေ
ပြောလာကြရင်း ကာလ်းရဲ့ စာအုပ်တစ်ချို့ကို ကူပြီး ကိုင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်.
ခုတော့လည်း ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် စကားတပြောပြောနဲ့ ကာလ်းဟာ လူရည်သန့်
လူငယ်လေးတစ်ယောက် ဖြစ်နေပြန်ပါပြီ။ ကျွန်တော်က ကာလ်းကို “ဘောလုံးကစားဖို့
၀ါသနာပါသလား” လို့မေးတော့ သူက “ပါတယ်” လို့ပြန်ဖြေပါတယ်.. ဒီတော့ သူ့ကို
မနက်ဖန် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကစားမဲ့ ဘောလုံးပွဲမှာ ပါဝင်ကစားဖို့
ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်.. ကျွန်တော့်အိမ်ရှေ့ရောက်တော့လည်း အိမ်ထဲကို
၀င်ထိုင်ဖို့ သူ့ကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ဆီမှာရှိနေတဲ့
ဂိမ်းတစ်ချို့ကို သူနဲ့အတူတူ ကစားကြပါတယ်.. ညပိုင်းလောက်မှာမှ အိမ်မှာဘဲ
မေမေကျွေးတဲ့ ညနေစာကို စားပြီး သူပြန်သွားခဲ့ပါတယ်.. နောက်နေ့
ပိတ်ရက်၂ရက်လုံးလုံး ကာလ်းဟာ ကျွန်တော့်ဆီရောက်လာပြီး
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူ ပျော်ပျော်ပါးပါး ကစားကြရင်း
အချိန်ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်.. သူ့ကိုလည်း ကျွန်တော်အပါအ၀င်
ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတွေက ခင်မင်ကြသလို သူကလည်း ပျော်ရွှင်နေတာကို
နောက်တနင်္လာနေ့မနက်ရောက်တော့ ကာလ်းဟာ သောကြာနေ့တုန်းက ကျောင်းကနေအပြန်
သယ်သွားတဲ့ စာအုပ်အပုံကြီးကို ပွေ့ပိုက်ပြီး ကျောင်းသွားဖို့
လျှောက်လာပါတယ်.. သူ့ကိုတွေ့တော့ ကျွန်တော်က ရပ်စောင့်နေလိုက်ပြီး “မင်း
ဒီပုံစံအတိုင်းသာ စာအုပ်တွေ နေ့တိုင်း သယ်မယ်ဆိုရင် မင်းလက်မောင်း
ကြွက်သားတွေ ပိုကြီးလာတော့မှာ သေချာတယ်” လို့ ကျွန်တော်သူ့ကို
နောက်လိုက်ပါတော့တယ်. သူက ရယ်မောလိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ကို သူ့လက်ထဲက
စာအုပ်တစ်ချို့ လှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်. အဲဒီအချိန်ကစလို့ ကာလ်းနဲ့
ကျွန်တော်ဟာ သိပ်ကို ခင်မင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်..
အထက်တန်းတက်နေတဲ့ ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်း သူနဲ့ကျွန်တော်ဟာ
အခင်ဆုံးသူတွေအဖြစ် တောက်လျှောက်တွဲလာခဲ့ကြပါတယ်.. သေချာပေါင်းကြည့်လေ
ကာလ်းမှာ သူငယ်ချင်းကောင်း တစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်စရိုက်မျိုး ရှိလေ ဆိုတာ
ကျွန်တော်သိခဲ့ရပါတယ်.. သူဟာ သူငယ်ချင်းတွေအပေါ် သိပ်ကို
စိတ်ရှည်သီးခံတတ်ပြီး စိတ်ကောင်းလဲရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်တန်းကျောင်းမှာ ၄နှစ်တိတိ ကားလ်းနဲ့ ကျွန်တော်
ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်တွေလို ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ ပေါင်းဖြစ်ကြပါတယ်..
အထက်တန်း နောက်ဆုံးနှစ်မှာတော့ တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ စဉ်းစားကြတဲ့အခါ
ကျွန်တော်က Georgetown ကို သွားဖို့ စဉ်းစားပြီး သူကတော့
ဆရာဝန်လုပ်ဖို့အတွက် Duke တက္ကသိုလ်ကို တက်မယ်လို့ ပြောပါတယ်.. ဒါပေမဲ့
ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်တော်တို့၂ယောက်ကြား ဘာတွေဘဲခြားနေနေ အခင်ဆုံး
သူငယ်ချင်းတွေအဖြစ် ဆက်ပြီး ရှိနေကြမှာပါ။ အဲဒီအထက်တန်း နောက်ဆုံးနှစ်မှာ
ကာလ်းဟာ ဂရိတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ အောင်မြင်တဲ့အပြင် တစ်ကျောင်းလုံးမှာ
အမှတ်အများဆုံးသူ တစ်ယောက်လဲ ဖြစ်တာကြောင့် အထက်တန်းအောင်မြင်တဲ့
အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုပွဲသဘင်မှာ စကားပြောဆိုဖို့ ရွေးချယ်ခြင်းခံရပါတယ်..
သူရဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် ကျွန်တော်လည်း ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ရပါတယ်။
အခုတော့ ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ ဂုဏ်ပြုပွဲနေ့မှာ စင်ပေါ်စကားတက်ပြောရမဲ့ ကားလ်ဟာ
အထူး ကြည်လင်ရွှင်ပျနေတဲ့ ပုံစံရှိပြီး သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့
လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ဟန်ပန်ကို သေသေချာချာ တွေ့မြင်ရပါတယ်.. လွန်ခဲ့တဲ့
၄နှစ်လောက်က စာအုပ်တွေ တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်နဲ့ ကျွန်တော်စတွေ့ခဲ့တဲ့
ပုံဏ္ဍာန်နဲ့ ကွာခြားချင်တိုင်း ကွားခြားလို့ နေပါပြီ။
မျက်မှန်တပ်ဆင်ထားပြီး အ၀တ်အစားကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ကျကျနန ၀တ်ဆင်ထားတတ်တဲ့
သူ့ပုံက လူရည်မွန် လူရည်သန့် ပုံစံအပြည့်နဲ့မို့ ကျွန်တော်ကတောင်
ပြန်ပြီး မနာလိုရလောက်အောင် မိန်းခလေးတိုင်း စိတ်ကူးယဉ်ချင်စရာ
ဖြစ်လို့နေပါတယ်.. တွေ့ကာစနေ့က ကပ်သီးကပ်သပ် လူတစ်ယောက်လို့
ထင်ခံခဲ့ရဖူးတဲ့ ကာလ်းတစ်ယောက်ဟာ ခုကျတော့ ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီး
အားကျငေးမောနေရတဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ စင်ပေါ်တက်ပြီး
စကားပြောဖို့တော့ အနည်းငယ် တုန်လှုပ်နေဟန်ရှိတဲ့ သူ့မျက်နှာပေးကြောင့်
ကျွန်တော်က သူ့ကြောကို ပုတ်လိုက်ပြီး “သူငယ်ချင်း.. အားတင်းထား.. မင်းဟာ
သူများတကာထက် တော်တဲ့သူဆိုတာ မမေ့နဲ့.. အေးဆေး ဟုတ်ပြီလား။” လို့
ပြောပြီး အားပေးလိုက်တော့ ကျွန်တော့်ကို ပထမဆုံး စတွေ့စ နေ့က
သူပြုံးပြခဲ့ဖူးတဲ့ ကျေးဇူးတင်အပြုံးလေးကို ပြန်ပြုံးပြလိုက်ပြီး
“ကျေးဇူးဘဲ သူငယ်ချင်း” လို့ ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပြောပါတယ်။
သူစင်ပေါ်မှာ စကားပြောရမဲ့အလှည့် ရောက်တော့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်
ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ အေးဆေးစွာဘဲ စင်ပေါ်ကိုလျှောက်သွားခဲ့ပြီး
မိုက်ကရိုဖုန်းအရှေ့မှာ ရပ်လိုက်ကာ လည်ချောင်းကို တစ်ချက်ရှင်းလိုက်ရင်း
စကားစပြောပါတော့တယ်.. သူပြောတဲ့ စကားတွေက “ ဒီနေ့ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့
အထက်တန်းအောင် မြင်ပြီးဆုံးတဲ့ အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုပွဲနေ့ ဖြစ်ပါတယ်..
ဒီနေ့မှာ ကျောင်းတက်တဲ့ ကာလတစ်လျှောက်လုံး ကျွန်တော်တို့ကို
ကူညီခဲ့ကြသူများကို ကျေးဇူးတင်စကား ဆိုရမဲ့နေ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်..
ကျွန်တော်တို့ကို ယခုဒီအခြေအနေအထိ ရောက်အောင် ကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိဘတွေ၊ ဆရာတွေ၊ မွေးချင်း ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ။
နည်းပြတွေ နောက်… အထူးသဖြင့် အတူတူ ကျောင်းတက်ခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို
ကျးဇူးတင်စကား အထူးဆိုချင်ပါတယ်... ပြီးတော့လဲ ကျွန်တော်ဒီနေ့ ဒီနေရာကနေ
သူငယ်ချင်းဆိုတာ တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်သော လက်ဆောင်တစ်ခု
ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုကိုလည်း ပြောပြချင်ပါသေးတယ်.. ”
အဲဒီလို စကားအစချီပြီး ကျွန်တော်ရဲ့ သူငယ်ချင်း ကာလ်းဟာ
ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုကို အစပျိုးတော့တာပါဘဲ.. သူပြောနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို
မယုံနိုင်ခြင်းများစွာနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ မျက်လုံး အပြူးသား၊
ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ နားထောင်နေမိပါတယ်.. ကာလ်းပြောပြနေတဲ့ အကြောင်းအရာဟာ
သူနဲ့ ကျွန်တော် ပထမဦးဆုံး စတွေ့တဲ့ ရက်အကြောင်းကို ပြောပြနေတာ
ဖြစ်ပါတယ်.. သူဟာ သူ့အမေနဲ့ အကြီးအကျယ် စကားများတာကြောင့် အဲဒီ
အပတ်ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ သူ့ကိုယ်သူ သတ်သေတော့မယ်လို့ ဆုံဖြတ်လိုက်ပြီး
ကျောင်းက သူရဲ့ လော်ကာကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါတယ်.. တစ်ခြားသူတွေအတွက်
သူ့ပစ္စည်းတွေက အနှောက်အယှက် မဖြစ်စေချင်တာကြောင့် အဲဒီထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့
သူပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ စာအုပ်တွေအားလုံးကို အိမ်အပြန်မှာ သယ်ယူလာခဲ့တယ်လို့
ဆိုပါတယ်.. ဒါကြောင့် သူနဲ့ ပထမဆုံး စတွေ့တဲ့နေ့က စာအုပ်တွေတနင့်တပိုးနဲ့
မနိုင်မနင်း ရှိနေခဲ့တဲ့ သူ့ပုံစံကို ကျွန်တော် ပြန်သတိရလိုက်မိပါတယ်။
ကာလ်းဟာ စင်ပေါ်ကနေ ကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြလိုက်ပြီး
စကားဆက်ပြောနေခဲ့ပါတယ်.. “တကယ့်ကို ကျေးဇူးတင်စရာပါဘဲ.. ကျွန်တော်ဟာ
အလွန်တရာ ကံကောင်းလှစွာဘဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ကယ်တင်ခြင်းကို
ခံလိုက်ရပါတယ်.. အဲဒီနေ့ ကျောင်းကအပြန် စာအုပ်တွေ မနိုင်မနင်းနဲ့
ကျွန်တော့်ကို အပြုံးလေးတစ်ခုနဲ့ ရောက်လာပြီး လာကူညီတဲ့
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ဖြစ်လာမဲ့သူဟာ ဟောဟိုမှာ ထိုင်နေတဲ့ ဒယ်နီရယ်ပါ..”
သူက ကျွန်တော့ကို လက်ညိုးညွှန်လိုက်ပါတယ်.. ပြီးတော့ ဆက်ပြောတာက “
ကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြလိုက်တဲ့ သူ့အပြုံးဟာ ကျွန်တော့်ရင်ထဲအထိ
ရောက်သွားခဲ့ပြီးနောက် သူနဲ့တွေ့ပြီး သူငယ်ချင်းဖြစ်သွားတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ
ခင်မင်စရာကောင်းတဲ့ သူ့ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေမဲ့အစီအစဉ်
ပျက်သွားခဲ့ရပါတယ်.. အဲဒီနောက်မှာတော့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့
ကျောင်းသားဘ၀ကို သူနဲ့အတူတူ ဖြတ်သန်းကုန်ဆုံးလာရင်း ဒီနေ့မှာ ကျွန်တော်ဟာ
အခု အခြေအနေကို ရောက်လာခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်.. မမျှော်လင့်တဲ့ အဲဒီနေ့က
သူ့ရဲ့ အပြုံးနဲ့အတူ အကူအညီလေးတစ်ခုဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ကို
ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်.. ဒါကြောင့်လည်း သူငယ်ချင်းဆိုတာ
တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ လက်ဆောင်လေးတစ်ခုလည်း
ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောကြားရင်း ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ဒယ်နီရယ်ကို
ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်လို့ ပြောပါရစေခင်ဗျာ… ” လို့ စကားကို
ကားလ်ရဲ့ စကားအဆုံးမှာ ကားလ်ရဲ့ အဖေနဲ့အမေဟာ ထိုင်ရာက ထလာပြီး
ကျွန်တော့်ကို ကျေးဇူးတင်စကား လာရောက်ပြောကြားပါတယ်. ကာလ်းအမေရဲ့
မျက်ဝန်းမှာတော့ မျက်ရည်စ တစ်ချို့နဲ့ပါ။ ကျောင်းသားတွေ အားလုံးကလည်း
ကျွန်တော့်ကို ဂုဏ်ယူတဲ့အပြုံးတွေနဲ့ လှိုက်လှဲစွာပြုံးပြလို့ လက်ခုပ်သြဘာ
ပေးနေခဲ့ကြပါတယ်.. အိုး လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘာမှ မပြောပလောက်တဲ့ အပြုအမူလေး
တစ်ခုဟာလည်း တစ်ခြားသူတစ်ယောက်အတွက် အကြီးမားဆုံး ပြောင်းလဲမှုကို
ပေးနိုင်တယ်ဆိုကာ ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းကြီး သဘောပေါက်လိုက်ပါပြီ။
မရည်ရွယ်ပါဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ လုပ်ရပ်၊ အပြုအမူ အသေးအမွှားလေး
တစ်ခုခုဟာ တစ်ခြားသူအတွက် ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေ၊ ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေ
ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲစေနိုင်တယ် ဆိုလို့ရှိရင် သူတစ်ပါး ထိခိုက်
နစ်နာစေနိုင်မယ်လို့ ထင်ရတဲ့ အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုမျိုးကို
ဘယ်လောက်သေးငယ်တဲ့ ကိစ္စဘဲဖြစ်ဖြစ် မပြောဖြစ်၊ မလုပ်ဖြစ်အောင်
အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းသိမ်းကြပြီး ကောင်းကျိုးဖြစ်နိုင်မဲ့ စကားတွေ၊
အပြုအမူတွေကိုသာ ပြောဆို ပြုမူသင့်ကြတယ် မဟုတ်ပါလား.. မမျှော်လင့်ဘဲ
အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ သူတွေကို တွေ့တဲ့အခါမှာလည်း ဘယ်လောက်ပင်သေးငယ်တဲ့
အကူအညီဖြစ်ပါစေ ပေးနိုင်ဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားသင့်ပါတယ်နော်။
ကိုယ်ပေးလိုက်ရတာ ဘယ်လောက်မှမဟုတ်ပေမဲ့ တစ်ဘက်လူအတွက်တော့
တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင် ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးလဲ ဖြစ်နေနိုင်ပါသေးတယ်..
John Deru ရဲ့ One small gesture can changeaperson's life ကို
from Ko Sithu Latt (facebook)
Posted by သျှင်နေမင်း at 4:51 AM
ပြန်လာခဲ့ တာပေါ့....
အလျှံညီညီနဲ့ ဆိုတော့ 
ပြန်လာခဲ့ တာပေါ့ ...
ညဉ့် နက်နက် မင်းရောက်ရောက်လာတော့ 
ပြန်လာခဲ့ တာပေါ့ .....
ငါပြန်လာခဲ့ တာပေါ့ ...
ပြန်လာခဲ့ တာပေါ့ ....
ငါ ရင်မောစွာနဲ့ 
ပြန်လာခဲ့ တော့ ...
(အကိုတော်တယောက်ရဲ့ ရင်ဘက်ကိုဝင်ဖောက်ကြည့် ထားတာပါ)
Posted by သျှင်နေမင်း at 7:40 AM
မင်း နဲ့ငါကြား
အချစ်မြို့ ရိုးက စောင့် မျော်ဆွေးနေသူပါ....၊ ၊
ငါတွေးရင်း လွမ်းလို့ နေတယ်..
ဒီအလွမ်းတွေ အဆုံးသပ်ဖို့ 
ရုန်းထွက်လို့ လာခဲ့ ပါ
ကျွန်တော့် စာရေးသက်တစ်လျှောက်မှာ ခေတ်လူငယ်တွေရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ တစ်ခါမှ ပြစ်တင်ဝေဖန် ရေးသားခဲ့တာ မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။ ပြစ်တင် ဝေဖန်သူတွေကိုတောင် ကျွန်တော်က ခေတ်လူငယ်တွေဘက်က အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် ပြောပြီး ခုခံပေးခဲ့ဖူးတယ်။
မှတ်မိပါသေးတယ်။ ဆံပင်ရှည်ထားတာကို မျက်စိနောက်ပြီး နှိပ်ကွပ်ခဲ့ကြတဲ့ အချိန်တစ်ချိန်တုန်းကပေါ့။ ဆံပင်ရှည်ထားတဲ့ လူငယ်လူကြီးတွေကို တွေ့ရာမဆိုင်း လမ်းဘေးထိုင်ခိုင်းပြီး ဆံပင်ရှည်ကို ဓားနဲ့ဖြတ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တချို့ ၁၉၇၄ ခု ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူးတယ်။
အဲသည်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ ဆရာတက်တိုးက သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်း ကော်ပိုရေးရှင်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးပါ။ ကျွန်တော်က မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတိုက်မှာ အယ်ဒီတာအဖြစ် အမှုထမ်းနေပါတယ်။ ဆရာတက်တိုးက လုပ်သားပြည်သူ့ နေ့စဉ်သတင်းစာမှာ ပင်တိုင်ဆောင်းပါး ရေးနေချိန်ဖြစ်တယ်။ အဲသည် ဆံပင်ရှည်တွေကို နှိပ်ကွပ်တဲ့အချိန်မှာ ဆရာတက်တိုးက လူငယ်ယောက်ျားလေးတွေ ဆံပင်ရှည်ထားခြင်းဟာ မကောင်းတဲ့အကြောင်း၊ လမ်းသရဲတွေသာ ဆံပင်ရှည်ထားကြောင်း စသည်ဖြင့် ဆောင်းပါးတစ်စောင် ရေးလိုက်တယ်။
ကျွန်တော်က မြန်မာ့အလင်းကနေ ပြန်ရေးတယ်။ လမ်းသရဲစိတ်ဓာတ်ဟာ ဆံပင်ရှည်မှာ ရှိသလားလို့ မေးခွန်းထုတ်လိုက်တာပါ။ ဆံပင်ရှည်ထားတိုင်း လမ်းသရဲစိတ် ၀င်နေပြီလို့ မယူဆပါနဲ့၊ ဆံပင်ရှည်လေးတွေနဲ့ ပရဟိတ လုပ်နေသူတွေ အများကြီးပါ၊ ဆံပင်ရှည်မထားဘဲ ဆိုးသွမ်းလူငယ် ဖြစ်နေတာတွေလည်း အများကြီးပါလို့ ပြန်လည်ချေပတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာတက်တိုးက အင်မတန်မှ စာပေစိတ်ရှိသူပါ။ သူဟာ ရာထူးအလျောက် ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းပေါ်က ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည်တုန်းက ပြည်သူပိုင်သတင်းစာ မြန်မာငါးစောင် (ကြေးမုံ၊ လုပ်သား၊ မြန်မာ့အလင်း၊ ဟံသာဝတီ၊ ဗိုလ်တထောင်) နဲ့ အင်္ဂလိပ် နှစ်စောင် (လုပ်သား အင်္ဂလိပ်နဲ့ ဂါဒီယန်) တို့ကို ဆရာတက်တိုးက အုပ်ချုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူလို ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ "အမ်ဒီကြီး" က ရေးလိုက်တဲ့ ဆောင်းပါးကို ကျွန်တော်လို သာမန်အယ်ဒီတာလေး တစ်ယောက်က ချေပတာကို တစ်ခြားလူကြီးတွေဆိုရင် ရှက်ရမ်းရမ်းမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ဆရာတက်တိုးက စိတ်မဆိုးပါဘူး။ ဆရာက ဆောင်းပါးရေးပြီးတော့ပဲ ပြန်လည်ရှင်းလင်းတယ်။ ဆရာရှင်းလင်းတဲ့အထဲ ကျွန်တော်မှတ်မိနေတာကတော့ "ဟုတ်ပါတယ်၊ မောင်ဝံသရေးသလို ဆံပင်ရှည်ထားတိုင်း လမ်သရဲ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် လမ်းသရဲတိုင်းကတော့ ဆံပင်ရှည်ထားတယ်။ ဒါကိုတော့ မငြင်းနိုင်ဘူး" လို့ ရေးလိုက်တာပါ။
ကျွန်တော်က ငယ်စိတ်နဲ့ဆိုတော့ ဆရာပြန်ရှင်းတဲ့အထဲက လစ်ကွက်ဟာကွက်တွေကို ထောက်ပြီး ဆောင်းပါးတစ်စောင် ထပ်ရေးပါတယ်။ သည်တစ်ခါတော့ အဲသည်တုန်းက မြန်မာ့အလင်း အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်တဲ့ ဆရာဦးစိုးမောင် (သာဂရ ငစိုး/ပခန်းရေချမ်း) က သတင်းစာမှာ မထည့်ပေးတော့ပါဘူး။ ဂုဏ်အရကော၊ အသက်အရပါ ကြီးမားတဲ့ ကိုယ့်အထက်လူကြီးတစ်ယောက်ကို ထပ်ပြီး အချေအတင် မလုပ်ပါနဲ့တော့လို့ ကျွန်တော့်ကို ဖျောင်းဖျပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ကျေကျေနပ်နပ် ပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဆရာသာဂရငစိုး ဆိုတာကလည်း ဆရာဒဂုန်တာရာတို့နဲ့ခေတ်ပြိုင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထွက် ကလောင်လက်ဟောင်းကြီး တစ်ဦးဖြစ်လေတော့ ကျွန်တော်တို့က လေးစားရိုသေပြီးသားပါ။
အဲသည်ဖြစ်ရပ်ကို ကျွန်တော် ပြန်လည်တင်ပြနေတာက ခေတ်လူငယ်တွေရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော့်မှာ ဆန့်ကျင်အမြင် မရှိခဲ့ဘူးဆိုတာကို ပြောချင်တာပါ။ အလွန်အကျွံ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ လော်လီတဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတွေကို ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ မတွေ့ဘဲ ရှိချင်ရှိမယ်။ ဥပမာ ယောက်ျားလေးတွေ နားကပ်ပန်တာ၊ မိန်းကလေးတွေ ပေါင်လယ်အထက် ဂါဝန်တိုလေးတွေ ၀တ်တာ ကျွန်တော် မကြိုက်ဘူး။ သို့ပေမယ့် မကြိုက်တဲ့အကြောင်း စာတစ်တန် ပေတစ်စောင် မရေးခဲ့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒေါ်ဒေါ် လူထုဒေါ်အမာ တို့လို ကလောင်ကြီးတွေက အကြိမ်ကြိမ် ရေးပြီးကြပြီပဲ။ တခြား စာရေးဆရာကြီးများလည်း မကြာခဏ ရေးနေကြတာပါပဲ။ စာရေးဆရာတွေက ရေးတိုင်းလည်း ခေတ်လူငယ်တွေက ပြုပြင်ကြတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ သည်တော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပဲ ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ဒီနေ့ခေတ် လူငယ်အတော်များများဟာ စာမဖတ်ကြဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် အသေအချာ သိနေတယ်။ စာဖတ်ရင်တောင် သူတို့ကို ကောင်းစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ရေးတဲ့ ပြုပြင်ရေးစာပေတွေကို ဘေးဖယ်ထားချင်ကြတယ်။ "သွားစမ်းပါကွာ၊ တို့ကို ဆရာလုပ်တဲ့ စာမျိုးတွေကို ကိုင်တောင် မကိုင်ချင်ဘူး" လို့ ပြောတာတောင် ကြားဖူးတယ်။
ကျွန်တော် အခု ပြောခဲ့တာတွေကို ဟုတ်ရဲ့လားလို့ သံသယ မဖြစ်ပါနှင့်။ နှစ်အစိတ်လောက် အချိန်ပြည့်သတင်းစာသမား လုပ်ခဲ့သူဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မသေချာတဲ့ အချက်အလက်ကို ဘယ်တော့မှ မပြောပါဘူး။ ဒီနေ့ခေတ် လူငယ် အတော်များများရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေဟာ မယုံနိုင်လောက်အောင် လမ်းလွဲနေတာကို ကျွန်တော် ပြောချင်တာပါ။
လူငယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရေးကြတဲ့အခါ ယနေ့ခေတ် လူငယ်တွေ တော်တဲ့အကြောင်း၊ ကြိုးစားတဲ့အကြောင်း၊ လူငယ်တွေဟာ အနာဂတ်အတွက် အားထားစရာဖြစ်တဲ့အကြောင်း စသည်ဖြင့် မြှောက်ပင့်ရေးကြတာတွေက များနေတယ်။ (အဲဒါမျိုးတွေ ကျွန်တော်တို့က ပိုရေးတတ်တာပေါ့။ အရင်တစ်ခေတ်က သတင်းစာတွေမှာ ခေါင်းကြီးလိုတစ်မျိုး၊ ဆောင်းပါးလိုတစ်ဖုံ တာဝန်အရ အများကြီး ရေးခဲ့ဖူးတာပဲ။)
အခု တကယ်တမ်း ကျွန်တော်တို့တွေ တွေ့နေရတာက လူငယ်တွေထဲမှာ မကြိုးစားသူတွေက ပိုများနေတယ်။ တစ်စုံတစ်ခုကို ပို်င်ပိုင်နိုင်နိုင် တတ်ကျွမ်းလိမ္မာသူ အလွန်နည်းတယ်။ သင်တန်းတွေ လိုက်တက်နေကြပြီး အောင်လက်မှတ်တွေ တစ်ထမ်းကြီး ယူခဲ့ကြပေမယ့် အဲဒီ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ကိုပဲ ပြန်မေးကြည့်၊ ယောင်ဝါးဝါးချည်းပဲ။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်း မိတ်ဆွေရင်းချာတချို့က သူတို့ရဲက အလုပ်ဌာနတွေမှာ ၀န်ထမ်းသစ်ခန့်ထားရေး အင်တာဗျူးလုပ်ပေးဖို့ ကျွန်တော့်ကို အကူအညီတောင်းလို့ အင်တာဗျူးတွေ ထိုင်ပေးခဲ့ရဖူးတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်က ကျွန်တော် အစိုးရသတင်းစာမှာ လုပ်ခဲ့တုန်းကလည်း တာဝန်အရ အလုပ်အင်တာဗျူးတွေ ထိုင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
အင်တာဗျူးအတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ အရင် နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်က လူငယ်တွေကို မေးရမြန်းရတာ ပို အားရစရာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်တယ်။ သူတို့က အင်တာဗျူးမှာ မေးနိုင်တာတွေကို ဖြေဖို့အတွက် အကုန် ပြင်ဆင်လာကြတာကိုး။
မကြာသေးခင်က အင်တာဗျူးဝင်သူ လူငယ်တွေကျတော့ အလုပ်သာ လာလျှောက်တာ၊ လျှောက်ထားတဲ့အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သိကောင်းစရာတွေကို လေ့လာပြင်ဆင်ခဲ့မှု မရှိသလောက်ပဲ။ အဲဒီ လူငယ် ၁၀၀ မှာ ၈၀ လောက်ဟာ သနားစရာကောင်းလောက်အာင် ညံ့နေတာ တွေ့ရတယ်။ သူတို့ကို ကြည့်ရင်း ကျွန်တော် အရမ်း ၀မ်းနည်းမိတယ်။ ဘာကြောင့် သည်လို ဖြစ်နေကြတာလဲ တူတူမလေးတို့ရယ်လို့တောင် မချိတင်ကဲ မေးချင်စိတ် ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
လူငယ်တွေရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုအကြောင်းကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဘယ်တော့မှ မဝေဖန်ဘူးဆိုတာ ပြင်ပ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုဆိုတာ သာမညပဲလို့ ယုံကြည်လို့ပါ။ ကျွန်တော်က အပေါ်ယံ အ၀တ်အစား အသွင်အပြင်ထက် လူရဲ့ အတွင်းစိတ်အနှစ်သာရက ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ ဒါပေမယ့် ခုတော့ အဲဒီယုံကြည်ချက်ကို ပြောင်းလဲရမလို ဖြစ်နေပြီ။
လူငယ်တွေထဲမှာ အ၀တ်အစား လော်လီသူတွေ ပိုများလာတယ်။ ပညာပြည့်ဝရေးအတွက် ဖိဖိစီးစီး ကြိုးစားသူဦးရေက ပိုနည်းလာတယ်။ ပညာဆိုတာ တကယ်တတ်ရင် တကယ် အကျိုးရှိတယ်လို့ သူတို့ မယုံကြည်ကြဘူး။ သည်တော့ အသိပညာရော အတတ်ပညာရော သူတို့ ပေါက်မြောက်အောင် မသင်ကြဘူး။ တစ်မတ်ဖိုးလောက် သိတာကို တစ်ကျပ်ဖိုးလောက် ထင်နေတယ်။ တစ်ဝက်တစ်ပြက်နဲ့ ရပ်ပစ်ကြတယ်။ အဲသလို လူတွေ ဘာဖြစ်လာမလဲ။ တတ်ယောင်ကားတွေပဲ ဖြစ်လာမှာပေါ့။
တတ်ယောင်ကားတစ်ယောက်ဟာ ဘာမှမတတ်တဲ့သူထက် ပို အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ ဘာမှမတတ်သူက သူမတတ်တာကို သူ့ဖာသာသိလို့ စွန့်စားပြီး ဘာမှ မလုပ်ရဲဘူး။ သူတို့မှာ သိမ်ငယ်စိတ် ရှိတယ်။ သိမ်ငယ်စ်ိတ်ကနေ ရန်လိုစိတ်တွေ ပွားများလာတတ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနာဂတ်ကို တတ်ယောင်ကားတွေလက်ထဲ မအပ်ချင်ဘူး။ တကယ်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ အရည်အချင်းပြည့်ဝသူတွေ လက်ထဲကို အပ်ချင်တယ်။ ခေတ်လူငယ်တွေကို ပန်ကြားချင်တာက ဘာကိုပဲ သင်သင် တကယ်တတ်အောင် သင်ကြပါ ဆိုတာပါပဲ။
Posted by သျှင်နေမင်း at 8:02 AM
အသံမြည်တယ်။ မိုင်သုံးဆယ်နှုန်းဆိုရင် တံခါးကမြည်တယ်။လေးဆယ်နှုန်းရောက်
( FWD Mail မည်သူရေးသည်မသိပါ)
Posted by သျှင်နေမင်း at 7:56 AM
တကယ်တော့ ရေးမတင်သင့် တဲ့ post တခုပါ.ဘာကြောင့် လည်းဆို
တော့ Right click မပေးဘူဆိုထဲကသူ့ blog ကစာတွေကိုအကြောင်း
တခုခုကြောင့် မယူစေချင်တဲ့ သဘောပါပဲ.ဒါပေမယ့် နည်းပညာဆိုတာ
ကြာရှည်ထိန်းကွယ်ထားလို့ ရတဲ့ အရာမဟုတ်ပါဘူး .တနေ့ နေ့ တချိန်
များများလေ့ လာခဲ့ ပါတယ်ဒါပေမယ် Right click မပေးအောင်ဘယ်လို
လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အရေးအသားများကိုသာဖက်ရပြီ ဘယ်လိုယူရမယ်
ဆိုတဲ့ အရေးအသားကိုတော့ မဖက်ဖြစ်သေးပါဘူး. လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်ရက်
လောက်ကတော့ နည်းပညာဆိုက်တခုမှာတော့ တွေလိုက်ပါတယ်.
ဒါပေမယ်သူ့ မှာကန့် သတ်ချက်တွေများတော့ စာဖက်သူတွေအတွက်
စာသားများပုံများကိုအလွယ်တကူယူတဲ့ နည်းကတော့ မသိရင်တော့ 
ရွှေတဆုပ် သိရင်တော့ ဖွဲတဆုပ်ပါပဲ.ပထမဆုံးကိုယ်ယူမယ့် 
ဘလောက်ကိုဖွင့်ထာ ပြီးတဆက်ထဲမှာပဲnew tab ကိုဖွင့်ပြီ gmail
ကိုဖွင့် ပြီးလျင်ကိုယ်လိုချင်သော စာသားနှင့် ပုံများကိုRight click
နိပ်ပြီ selelct all လုပ်ပြီးကိုယ်ရဲ့ gmailကcompose mail ကိုအရန်
သင့် ဖွင့် ထားပြီ Draw ဆွဲချပြီ text body ထဲကိုထည့် လိုက်ယုံပါပဲ၊
တော်gmail ကိုadd ပြီးမေနိင်ပါတယ်.ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်
တက်လို့ တော့ မဟုတ်ပါဘူး..............
Posted by သျှင်နေမင်း at 8:55 AM
အဲဒီလို သူမေးလိုက်တိုင်း ဆိုင်ရှင်တွေက သူ့ကိုနောက်ပြောင်သူ၊ ကျပ်မပြည့်သူထင်ပြီး ဆိုင်ပြင်ဖက်ကို မောင်းထုတ်လိုက်ကြတယ်။ နေဝင်မိုးချုပ်ခါနီးအချိန်မှာ (၂၉)ဆိုင်မြောက် ဆိုင်ပိုင်ရှင်က သူ့ကိုနွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုဆိုခဲ့တယ်။
ဆိုင်ပိုင်ရှင်က ဆံပင်တွေဖြူဖွေးနေတဲ့ အသက်(၆ဝ)ကျော် အဘိုးအိုတစ်ဦးဖြစ်တယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့အမေးကို ကြားတော့ အဘိုးအိုက ပြုံးပြုံးရယ်ရယ်နဲ့ ပြန်မေးခဲ့တယ်။
အဘိုးအိုရဲ့ ကြင်နာတဲ့စကားကိုကြားတော့ ကလေးငယ်က မျက်ရည်အဝဲသားနဲ့ သူ့နာမည်ဟာ ဘွန်နီဖြစ်ကြောင်း၊ ငယ်စဉ်က မိဘတွေသေဆုံးခဲ့လို့ ဦးလေးဖြစ်သူနဲ့နေကြောင်း ပြောပြတယ်။ ဦးလေးက လက်သမားတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း၊ ရှေ့ရက်က ဦးလေးဟာ အမြင့်ပေါ်ကပြုတ်ကျပြီး ဆေးရုံရောက်နေရကြောင်း၊ အခုချိန်ထိ မေ့မျောနေသေးကြောင်း၊ ဆရာဝန်က "ဘုရားသခင်"သာလျှင် ဦးလေးကို ကယ်တင်နိုင်မယ့်အကြောင်း ပြောတယ်။ ဘွန်နီက ဘုရားသခင်ဆိုတာ အရမ်းထူးဆန်းတဲ့အရာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဦးလေးအသက်ရှင်ဖို့ ဘုရားသခင်ကို သူလိုက်ဝယ်နေကြောင်း အဘိုးအိုကိုပြောပြခဲ့တယ်။
"ယူသွား.. ကလေး.. မင်းဦးလေး ဒီ "ဘုရားသခင်"ကို သောက်ပြီးရင် နေကောင်းသွားလိမ့်မယ်"
ဘွန်နီက ဝမ်းသာအားရ အချိုရည်ပုလင်းကို ရင်ခွင်ထက်မှာပွေ့ပြီး ဆေးရုံကိုအပြေးသွားခဲ့တယ်။ လူနာခန်းထဲရောက်တာနဲ့ "ဦးဦး.. ဦးဦး.... ဘုရားသခင်ကို သားဝယ်ခဲ့ပြီ... ဦးမကြာခင် နေကောင်းသွားလိမ့်မယ်" လို့ပြောတယ်။ နောက်တစ်ရက်မှာ အထူးကုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဆေးရုံကိုရောက်လာခဲ့ပြီး ဘွန်နီ့ဦးလေးကို ဆေးကုပေးခဲ့တယ်။
အဲဒီအဖွဲ့က အကောင်းဆုံးကုသမှု၊ ခေတ်အမီဆုံးကိရိယာတွေနဲ့ ဘွန်နီဦးလေး နေကောင်းပျောက်တဲ့အထိ ကုသပေးခဲ့တယ်။ ဆေးရုံကမဆင်းခင် ကြီးမြင့်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုမြင်တော့ ဘွန်နီဦးလေး ပြန်မေ့မျော့သွား မတတ်ပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် ဆေးရုံတာဝန်ခံက ကုန်ကျစရိတ်တွေကို အဘိုးအိုတစ်ဦး ရှင်းပေးခဲ့ကြောင်း၊ အဲဒီအဘိုးအိုဟာ သူဌေးသူကြွယ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ ဥက္ကဌရာထူးကနေ အငြိမ်းစားယူထားကြောင်း၊ သူ့အားလပ်ရက်ကို ကုန်စုံဆိုင်လေးဖွင့်ပြီး ကုန်ဆုံးခဲ့ကြောင်း၊ အထူးကုအဖွဲ့ကိုလည်း သူပဲငှားရမ်းခဲ့ကြောင်းပြောပြတယ်။
အဘိုးအိုကို ဘွန်နီတို့ အရမ်းကျေးဇူးတင်မိခဲ့ပြီး အဘိုးအိုကို သွားရောက်ရှာဖွေခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဘိုးအိုက ဆိုင်ကိုရောင်းပြီး ခရီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ရက်သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အဘိုးအိုရဲ့စာတစ်စောင်ကို သူတို့လက်ခံရရှိခဲ့တယ်။ စာထဲမှာက...
"အမောင်လူငယ်... ခင်ဗျားမှာ ဘွန်နီလိုတူတစ်ယောက်ရှိတဲ့အတွက် အရမ်းကံကောင်းပါတယ်။ ခင်ဗျားအသက်ကိုကယ်ဖို့ ငွေတစ်ဒေါ်လာနဲ့ နေရာအနှံ့ ဘုရားသခင်ကို သူလိုက်ဝယ်ခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါ.. ခင်ဗျားအသက်ကို သူကယ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားသေချာမှတ်ထားရမှာက တကယ့်ဘုရားသခင်ဆိုတာ လူတွေရဲ့မေတ္တာစိတ်ပဲဖြစ်တယ်" လို့ ရေးထားပါတယ်။
မူရင်း-- google search or 請問您這兒有上帝賣嗎 (ဘုရားသခင်ရောင်းပါသလား?)
Posted by သျှင်နေမင်း at 1:34 AM
ပျောက်ဆုံးနေပြီး လွမ်းနေသူ ဆိုတာကြီးလည်း
Posted by သျှင်နေမင်း at 8:52 AM
Posted by သျှင်နေမင်း at 5:15 AM
(နှစ်ဦးသဘောတူ) မောင်ရိုးဆိုသူ လူငယ်တစ်ဦးအားမိဘများက အိမ်ထောင်ပြုရန်ပြောသည်။ မိဘများသဘောတူနေသောမိန်းခလေး အရုပ်ဆိုးသောလည်း အလွန်ချမ်းသာသည်။
ကဲ...မောင်ရိုး မင်းကြိုက်နေသောမိန်းခလေးးကိုယူမလား။ ငါတို့ပေးစားမဲ့မိန်းခလေးကိုယူမလား။
မောင်ရိုး သေချာစဉ်းစားပြီးမှ မိဘများကိုပြောလိုက်သည်....
အမေတို့သဘောတူတဲ့မိန်းခလေးအိမ်မှာထမင်းစားသောက်ပြီး ........သားကြိုက်တဲ့မိန်းခလေးအိမ်မှာအိပ်မယ်ဗျာ နော်....
(ခိုင်းနည်းသစ်) ယောင်္ကျားဖြစ်သူသည် ဘာခိုင်းခိုင်းအလွန် အပျင်းထူသည်။ မိန်းမဖြစ်သူသည်အားလပ်ချိန်တွင်ယောကျာင်္းကိုခြံထဲဆင်းပြီး သစ်ပင်စိုက်စေချင်သည်။
သို့သော် တော်တော်နဲ့ခိုင်းလို့ရမည်မဟုတ်။တစ်နေ့တွင် အကြံရကာမိန်းမဖြစ်သူက......
`ရှင်ခြံထဲဆင်းပြီးဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလား၊သြော်အင်းလေ မလုပ်နိုင်ရင်လဲနေပါစေ။ အသက်လည်းရလာပြီဆိုတော့ အဘိုးကြီးလည်းဖြစ်တော့မှာဘဲလေ´
မကြာမီ သူ၏ယောင်္ကျားထပြီးခြံထဲဆင်း အလုပ်လုပ်လေသည်။
(လက်ထပ်လျင်) အမျိုးသမီးနှစ်ယောက် တစ်နေ့လက်ထပ်ရင် ဘယ်လိုယောင်္ကျားမျိုးကိုရှာပြီး လက်ထပ်ရမည့် အကြောင်းပြောနေကြသည်။
ဒုတိယမိန်းမ။ ။အို..........ဒါဆို နင်ကယောင်္ကျား ၃ ယောက်တောင်ယူမှာလား
(နောင်တ) ညတစ်ည သန်းခေင်ယံအချိန်တွင် ဇနီးဖြစ်သူတစ်ရေးနိူးလာ၍ ယောက်ျားဖြစ်သူကို ရှာရာ မီးဖိုချောင်ထဲ၌ ရှိက်ကြီးတငင် ငိုကြွေးနေသည်ကို တွေ့ လိုက်၇လေသည်။
(မထူးပါဘူး) လမ်းတွင် ဖိနပ်အနီတစ်ဖက်၊အနက်တစ်ဖက်မှား စီးလာသော ကလေးတစ်ဦးကိုတွေသဖြင့် လူကြီးတစ်ဦးက...
`ဟေ့ချာတိတ် မင်းဖိနပ်အနီတစ်ဖက် ၊အနက်တစ်ဖက် ဖြစ်နေတယ်၊ အိမ်ပြန်လဲလိုက်အုံး´
ဟာ...အိမ်ပြန်လည်း မထူးပါဘူး ဦးဦးရာ...
(ညီမျှသလိုပဲ) အသက်၄၀ခန့်ရှိသောလူပျိုသိုးကြီးသည် မိဘများအား အိမ်ထောင်ပြုချင်ကြောင်း ဖွင့်ဟပြောသည်။
ထိုအခါမိဘဖြစ်သူတို့က ရိုးအသော သားအကြာင်းသိသဖြင့် ဒါဆိုမေမေတို့က
ထိုအခါလူပျိုသိုးကြီးက မျက်နှာငယ်လေးဖြင့်.......့် မေမေတို့စကားလည်းနားထောင်ပြီးသားဖြစ်အောင် သားလိုချင်တာလည်းဖြစ်အောင်
(လက်တည့်လာလို့ပါ) လင်မယားနှစ်ဦးကွာရှင်းပြတ်ဆဲမည်ဟု ရုံးတော်သို့ရောက်လာသည်။
(မှီနိင်သေးတယ်) အမျိုးသမီး၏နောက်သို့လူငယ်တစ်ယောက် ပြေးလိုက်လာပြီးပြောသည်။
အမျိုးသမီး ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီး မေးသည်။
``ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ထီးမေ့ကျန်ခဲ့တာ ခင်ဗျားလား´´
``ဟုတ်ပါရဲ့ ကျွန်မ ထီးမေ့ကျန်ခဲ့တယ်´´
(သူဌေးနှင့်နွား) လူတစ်ယောက်ကသူဌေးကြီးတစ်ဦးထံတွင် နွားတစ်ကောင်ငှားချင်သည်။
တခါက အရူးတွေကို ခုနှစ်ထပ်ရှိတဲ့အရူးထောင်မှာထား တယ်တဲ့ တနေ့ကျတော့ အရူးတွေက အော်နေကြ တယ် " ၂၂ " ဆိုပြီးတော့ အဲဒါနဲ့တာဝန်ကျဆရာဝန်ကလည်း ထူးဆန်းတယ်ဆိုပြီး မြေညီထပ်ကအရူးတွေကိုသွားမေးတယ် အရူးတွေကအပေါ်ထပ်ကအော်လို့အော်ရတာပါတဲ့ ဒါနဲ့ ဆရာဝန်လည်း ဒုတိယထပ်ကိုတက်သွားပြီးမေးပြန်တယ် ဒုတိယထပ်က အရူးတွေကကျတော့နဲနဲအဆင့်မြင့်လာတယ် စာတန်းတွေဘာတွေနဲ့ပေါ့ သူတို့ကလည်းအပေါ်ကအော်လို့အော်ရတာပါလို့ဖြေပြန်တယ် ဒါနဲ့ထပ်တက်ပြန်တာပေါ့ တတိယထပ်ကျတော့ မိုက်ကရိုဖုန်းတွေဘာတွေနဲ့အော်နေကြတာပေါ့ သူတို့ကလည်း အပေါ်ကအော်လို့အော်ရတာပါလို့ပြောပြန်ကော ဒီလိုနဲ့ တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်တက်ရင်းတက်ရင်းနဲ့ နောက်ဆုံးထပ် ခုနှစ်လွာကိုရောက်တော့ အဲအထပ်မှာက ဂိုဏ်းစတား အရူးတွေကြီးပဲရှိတယ် ဒါနဲ့ဆရာဝန်ကထုံးစံတိုင်းမေးပြန်ရောတဲ့ အရူးတွေကဘာမှမပြောဘူး ပြတင်းပေါက်ကို လက်ညိုးထိုးပြတယ် ဆရာဝန်ကလည်းဘာများလည်းဆိုပြီးသွားကြည့်တာပေါ့ အဲချိန်မှာအရူးတွေက ဆရာဝန်ကိုခြေထောက်ကနေကိုင်ပြီး ပြတင်းပေါက်ကနေပစ်ချလိုက်ကြတယ် ပြီးတော့
သူတို့အားလုံးအော်လိုက်တာက ၂၃ ၂၃ တဲ့
(အဲ့ဒါလဲကောင်းပါတယ်) မိန်းခလေးနှစ်ယောက် စားသောက်ဆိုင်တွင်စကားပြောနေကြသည်။
ဒုတိယမိန်းခလေး......လွယ်ပါတယ်။ရုပ်ချောတဲ့သူနဲ့ ဆက်တွဲနေပေါ့။လက်ထပ်တဲ့ခါမှ ချမ်းသာတဲ့သူနဲ့လက်ထပ်လိုက်။
(သတင်း၃ခု) ခွဲစိတ်ကုသခံထားသော လူနာထံ ဆရာဝန် လာကြည့်သည်။
"ခင်ဗျားကို သတင်းသုံးခုပြောစရာရှိတယ်၊ တစ်ခုက မကောင်းတဲ့ သတင်း၊ နောက်တစ်ခုက ကောင်းတဲ့ သတင်း၊ အဲ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အကောင်းဆုံးပဲ၊ မကောင်းတဲ့ သတင်းက စပြောမယ်၊ မဖြတ်ရမဲ့ ခင်များခြေထောက်ကို ကျွန်တော်တို့ မှားဖြတ်မိတယ်၊
ကောင်းတဲ့ သတင်းကတော့ ဖြတ်ရမယ့် ခြေထောက်ကို ကျွန်တော်တို့ ထပ်ဖြတ်ပေးမယ်…. အဲ …..
အကောင်းဆုံး သတင်းကတော့ဘေးခန်းက လူနာက ခင်းဗျားရဲ့ရှူးဖိနပ်ကို သူဝယ်မယ်တဲ့ "
"မေမေ၊ ကျွန်တော် ယင်ငါးကောင်ကို သတ်လိုက်တယ်၊ နှစ်ကောင်က အထီး၊ သုံးကောင်က အမ" ဟု ငါးနှစ်သား လူငယ်လေးက သူ့မိခင်ကိုပြောလိုက်သည်။
"ဟုတ်လား၊ ဒါနဲ့သားက ယင်ကောင် အထီးနဲ့ အမ ဘယ်လိုခွဲသလဲကွဲ့။"
"အော်…ဒါလား နှစ်ကောင်က ဘီယာပုလင်းပေါ်မှာ၊ သုံးကောင်က ကြည့်မှန်ပေါ်မှာ နားနေကြတာလေ"
(ကောင်းပါတယ်) မောင်ချစ်။ ။ ငါသေသွားခဲ့ရင် မင်း နောက်အိမ်ထောင်ပြုမှာလား?
ဇနီးဖြစ်သူ။ ။ ဟင့်အင်း... ကျွန်မညီမနဲ့ပဲ နေမှာ။ ဒါနဲ့ ရှင်ကော ကျွန်မ သေသွားရင် နောက် အိမ်ထောင် ပြုမှာလား?
မောင်ချစ်။ ။ ဟင့်အင်း... ငါလဲ မင်းလိုပဲ မင်းညီမနဲ့ပဲ နေမှာပေါ့။
Posted by သျှင်နေမင်း at 5:00 AM